Yobhi 9 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
9 Waza waphendula uYobhi wathi: 2 “Enyanisweni ndiyazi ukuba kunjalo. Kodwa umntu ofayo unokuba ngolungileyo njani xa emangalelene noThixo?+ 3 Ukuba unokuyoliswa kukusukuzana naye,+ Akanakumphendula nakanye kweliwaka. 4 Ulumkile entliziyweni yaye womelele ngamandla.+ Ngubani onokubonisa iinkani kuye aze angenzakali?+ 5 Ususa iintaba,+ ukuze abantu bangazazi nokuzazi, Yena uzibhukuqayo ngomsindo wakhe.+ 6 Unyikimisa umhlaba usuke endaweni yawo, Ukuze kwaneentsika+ zawo zididizele. 7 Uthi elangeni alifanele likhanye, Yaye iinkwenkwezi uzijikeleza ngetywina,+ 8 Wolula amazulu eyedwa+ Yaye uhamba phezu kwamaza amakhulu olwandle;+ 9 Wenza ikroza leAsh, nekroza leKesile, Nekroza leKima+ namagumbi angaphakathi aseMzantsi; 10 Esenza izinto ezinkulu ezingaphengululekiyo,+ Nezinto ezimangalisayo ezingenakubaleka.+ 11 Khangela! Udlula ngakum yaye andimboni, Kwaye uhlabela mgama yaye andimqondi.+ 12 Khangela! Uyaxhwila. Ngubani na onokumxhathisa? Ngubani oya kuthi kuye, ‘Wenzani?’+ 13 UThixo akayi kuwubuyisa umsindo wakhe;+ Baya kuqubuda ngaphantsi kwakhe abancedisi bomhlaseli.+ 14 Kobeka phi na ukuba kunokwenzeka ndimphendule! Ndiza kuwakhetha amazwi am kuye,+ 15 Lowo endingayi kumphendula, nangona ndenze okulungileyo.+ Kulowo ndimelene naye emthethweni ndiya kucela ubabalo.+ 16 Ukuba bendimbizile, ngaba ubeya kundiphendula?+ Andikholwa ukuba ubeya kulibekela indlebe ilizwi lam; 17 Lowo undityumza ngesiphango Aze ngokuqinisekileyo awenze maninzi amanxeba am ngaphandle kwesizathu.+ 18 Akayi kundivumela ndisezele impefumlo epholileyo,+ Kuba uqhubeka endingxala ngezinto ezikrakra. 19 Ukuba nabani na womelele ngamandla, nanko ke;+ Ukuba nabani na uqinile kokusesikweni, akwaba bendinokubizwa! 20 Ukuba bendenze okulungileyo, umlomo wam ubuya kundivakalisa ndingongendawo; Ukuba bendingenakusoleka, ebeya kundivakalisa ndinobugwenxa. 21 Ukuba bendingenakusoleka, bendingayi kuwazi umphefumlo wam; Bendiya kubala ubomi bam. 22 Kukho into enye. Kungenxa yoko ndisithi, ‘Lowo ungenakusoleka, kwanalowo ungendawo, uyabaphelisa.’+ 23 Ukuba isikhukula sinokubangela ukufa ngequbuliso, Ekuphelelweni lithemba kwabamsulwa uya kuhleka. 24 Umhlaba unikelwe esandleni songendawo;+ Ubuso babagwebi bawo uyabugubungela. Ukuba akunjalo, ngoko, ngubani na? 25 Kwaneyam imihla ikhawuleza ngakumbi kunembaleki;+ Ibaleke yemka, ngokuqinisekileyo ayiyi kukubona ukulunga. 26 Idlule njengezikhephe zeengcongolo, Njengokhozi olutshawuzayo lufuna into edliwayo.+ 27 Ukuba ndithe, ‘Mandikulibale ukuxhalaba kwam,+ Mandiyijike inkangeleko yam,+ iqaqambe,’ 28 Bendizoyika zonke iintlungu zam;+ Ndiyazi ukuba akuyi kundigqala njengomsulwa. 29 Ndimele ndibe ngongendawo. Kutheni ndibulalekela ilize?+ 30 Ukuba eneneni bendizihlambe emanzini ekhephu, Ndaza ndahlambulula izandla zam kwipotasi,+ 31 Ngoko ubuya kundithi nkxu emhadini, Yaye ngokuqinisekileyo izambatho zam beziya kundicekisa. 32 Kuba akangomntu+ unjengam endingamphendula, Ukuze sibe ndawonye ukuze sigwetyelwe. 33 Akukho mntu wakugqiba phakathi kwethu,+ Ukuba abeke isandla sakhe phezu kwethu sobabini. 34 Makayishenxise intonga yakhe phezu kwam,+ Yaye ukothusa kwakhe, makungandinkwantyisi. 35 Ndivumele ndithethe ndingamoyiki, Kuba andityekelanga ekubeni njalo.